Ungasusa njani ii-comas kunye nee-hyperlink ukusuka kumanani kwi-Excel-Geofumadas
Ungasusa njani ii-comas kunye nee-hyperlink ukusuka kumanani kwi-Excel
NgoJuni, 2011 Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
Amaxesha amaninzi xa ukopa idatha kwi-Intanethi ukuya kwi-Excel, amanani aneekoma njengamawaka okwahlulahlula. Nokuba singatshintsha ifomathi yeseli iye kwinani, isengumbhalo kuba i-Excel ayinakuqonda amawaka okwahlulahlula emva kokuba inani linamanani amathandathu, oko kukuthi, ngaphezulu kwesigidi.
Ndiza kukubonisa imeko yetafile yee-intanethi, apho Ndathetha iintsuku ezimbalwa ezedlulileyo:
Jonga ukuba ikopi / uncamathisela isebenza njani, ukuba ayizithumeli iiseli ezidityanisiweyo. Kodwa loo manani ahamba njengeetekisi.
Ukuphuma kwabo kuthatha amanyathelo amathathu alula:
1. Fomatha iiseli njengombhalo.
Oku kwenziwa ngokukhetha isicatshulwa, ucofa ekunene kwaye ukhethe iiseli zeFomathi. Emva koko senza utshintsho.
2. Fumana iikoma uze uzitshintshe.
Oku kusebenze ngeqhosha le-Ctrl + b kwimeko ye-Excel ngeSpanish. Ukhetho lokufumana ikoma (,) lukhethiwe kwaye ibhokisi yokubuyisela ayinanto. Emva koko iqhosha Hlaziya konke.
Isiphumo kukuba zonke iikoma ziya kucinywa. Lumka, kufuneka ulumke kuba ukhetho kufuneka lubandakanye kuphela amanani esifuna ukuwatshintsha ukuze angonakalisi iinxalenye zefayile apho kukho iikhoma ezifanelekileyo.
3. Fomatha iiseli njengamanani.
Emva koko i-1 inokuphindaphindiweyo, kodwa ibonisa ukuba ifomathi yinombolo.
Indlela yokususa ii-hyperlink kwiiseli ezininzi
Ngokuqinisekileyo le ikhona enye indlela kodwa ndiyiyeke ihambe kuba isencamini yolwimi kwisenzo esinye. Ukucima nganye nganye ayisiyongxaki kuba yenziwe ngeqhosha lasekunene le mouse, kodwa ukuyenza kwiiseli ezininzi ayinakwenziwa nangayo ikopishwe kwaye idlwengulwe okhethekileyo, ngoko xa sibuza unamathisele imilinganiselo i-hyperlink iza kuhlala ihamba ngenxa yokuba ifakwe kwiseli njenge xml kwaye ingekho kwisicatshulwa.
Yintoni enokuyenza ukukopisha yonke into esithandayo, kwikholamu engenanto kunye nenketho ekhethiweyo ekhethekileyo, ukunamathisela izixhumanisi.
Ezi iiseli ziza kuba nomxholo kodwa zingekho i hyperlink kwaye ezi ziyakopizwa kwaye zifakwe kwiixabiso ukuya kwiiseli zangaphambili.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iinkcukacha-manani zoMsebenzisi we-Intanethi kwiHlabathi liphela
Post Next Imizuzu emi-5 yokuthemba ibhlog kaMatías NeiffOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-5 "Ususa njani ii-comas kunye nee-hyperlink ukusuka kumanani kwi-Excel"
Kundikhonze kakhulu enkosi. Ayifani nazo zonke i-YouTube geeks
Molo Ndidinga ukuphelisa i-comma ngokugcina i-0 ekupheleni kwedesimali, kodwa xa ndisebenzisa inkqubo efundisiweyo iyasuswa. I-2.950,30 ehlala i-295030. Ndisebenzisa eyiphi ifomathi? Okanye ndisebenzisa yiphi inkqubo? Enkosi !!
Oku kwenzeka kuwe kuba esikhundleni sokushiya indawo ecocekileyo, apho ukhetha ukuba kutheni ukuba i-comma izotshintshwa, ubeka isikhala kunye nebhayibha yendawo kwikhibhodi.
Ngoku kufuneka ukhethe isikhala esingentla naphantsi kwakho usiye sihlambuluke, kwaye siya kusula izikhala.
I-ps ikhangele kwaye ndenze amanyathelo abe ne-1,080,480 kwaye ndihlala 1 080 480 kwaye ndifuna i-1080480, yintoni endiyenzayo?